पिपिई नेपालमै उत्पादन गरिरहेका छाैं, अभाव हुँदैन : स्वास्थ्यमन्त्री
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि नेपालमा भएका सामग्री संकलन गरिएको बताएका छन् ।
उनले आज (मंगलबार) सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘यहाँ भएका सामग्री खोज्ने क्रममा रहेका छौं । कहाँ–कहाँ छन् खोजिरहेका छौँ । पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट (पिपिई) पोशाक केही प्राप्त भएका छन् ।’
उनले कोभिड–१९ को उपचार गर्दा प्रयोग हुने पोशाक (पिपिई) दैनिक ३०० समेत उत्पादन गरिरहेको जानकारी दिए । मन्त्री ढकालले नेपालमा नै पिपिई उत्पादन हुने भएकाले अभाव नरहने स्पष्ट पारे ।
उनले सात वटै प्रदेशमा कोभिड–१९ को उपचार गर्नका लागि ५० का दरले पिपिई पठाइएको समेत जानकारी दिए । मन्त्रालयले यसअघि बरामद गरिएको मास्क प्रत्येक प्रदेशमा ५० हजारका दरले पठाएको थियो ।
उनले सम्बन्धित ठाउँमा आशङ्का गरिएका व्यक्तिको नमूना परीक्षण काठमाडौँ ल्याउनका लागि आन्तरिक उडान र स्थलमार्ग बन्द भएकाले संयन्त्र बनाई वैकल्पिक उपाय समेत अवलम्बन गरिने उनको भनाइ रहेको थियो । ‘खकार परीक्षण गर्नका लागि बन्द भएको कारणले अप्ठ्यारो भएको छ । प्रत्येक दिन कसरी ल्याउने भन्नेमा लागिपरेको छौँ’ उनले भने ।
यसैगरी सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका अस्पतालसँग समन्वय गर्नका लागि मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कमिटी गठन गरेको छ ।
समितिको सदस्यमा डा. गुणराज लोहनी, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष डा. भगवान कोइराला, नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको अध्यक्ष डा. लोचन कार्की नेपाल नर्सिङ् सङ्घको अध्यक्ष डा. मनकुमारी राई, निजी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष वसुरिद्धिन अन्सारी र निजी अस्पताल सङ्घका अध्यक्ष वसन्त चौधरी रहेको सात सदस्यीय टोली रहेका छन् ।
मन्त्री ढकालले निजी अस्पतालले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामको महाअभियान सरकारलाई सहयोग गर्ने बताए । ‘हामी सरकारको अङ्गको रुपमा काम गर्छौ भन्नु भएको छ । निजी अस्पतालले यस महामारी रोकथाम गर्न सरकारको साथ दिन्छौँ भन्नु भएको छ’, उनले भने ।